Iimpazamo ye Crypto bezimali. Imposiso 2 - Blockchain News
Cryptotrader Peter McCormack lacazulula imeko kwimarike crypto kwaye bafika kwisigqibo sokuba abaninzi abathandi crypto entsha ukuza emarikeni ngokuqiniseka okuphelele ukuba baza kuba nako ukwenza ngokukhawuleza ubutyebi. Ngokuka McCormack, oku kukhokelela nje kuphela ukuphoxeka, kodwa ilahleko ngokukhawuleza mali.
ngokwendalo, xa imarike kwenzeka ngexesha elinye ixesha, bezimali ezininzi ezintsha ukuza kulo, ngethemba lokufumana i inzuzo lula. Ngaphezu, ukuba babhale ngayo yonke iindaba, yaye abo nokulawula ukufumana umvuzo olungileyo, ndixelele ngamabali kuyimpumelelo. Kodwa maqamza bazalwa: Kwathi nge kwiqamza dot-com, kunye efanayo wayekunye 2008 bubble izindlu.
kunjalo, market crypto ayisebenzi phantsi icebo ingeniso ekhawulezileyo. Oku a imarike lentelekelelo, apho abanye abadlali baye bakwazi ngokukhawuleza ubutyebi. Abaninzi bakhawuleza baphulukana nazo zonke izimali zabo. market crypto, njengayo nayiphi na yorhwebo, kuba oguquguqukayo, nto leyo ethetha ukuba emva kwethuba lokukhula, ixesha lokuwa uya kuza kunyanzeleka. Njengoko kwaye kuhle 2013: kwishedyuli jikelele cryptology, eli thuba ikhangeleka ngathi Ngomkhukula ukukhula amancinci, emva koko kwabakho ukwehla engabalulekanga.
kunjalo, inyaniso, ngoNovemba 2013 ubukhulu kwimarike crypto lakhula ngokukhawuleza sizoku lwisana yokufika abadlali abatsha ngotyalomali bitcoin – imali entsha olululo elizayo. ke, kuDisemba 4, 2013 inani wafika iphezulu yokuqala $ 15.7 billion. Kwaye yi December 19, capitalisation kwehle phantse ezimbini – ukuba $ 6.9 billion. market Crypto wathatha kwiminyaka engaphezu kwama emibini ukubuyisa kwaye ukufikelela nowakho elidlulileyo.
Le meko uvumelekile ukuba awaphinde, nangona namhlanje arhweba ngemali crypto kwahlukile koko siye sabona ku 2013: abadlali inkcazelo engakumbi kuyo, kwaye ecosystem ephuhlisa ngokukhawuleza wafumana kusebenzisa ezintsha. kunjalo, oku kwimarike lentelekelelo na ngokuwa na umzuzu. Kanjalo, kukho imizekelo yendlela ungafumana nobutyebi fast kuyo, kunjalo, amathuba yokulahlekelwa zonke yotyalo ngenxa izicwangciso kakubi utyalo-mali ocwangcisiweyo amaxesha amaninzi aphezulu.
Iimpazamo ye Crypto bezimali. Imposiso 1 Iimpazamo ye Crypto bezimali. Imposiso 3
Blockchain News 28 EyoMqungu 2018
Ifoni uqinisekisa yayo ...
Abanikazi lonke Melika bazama ukuba bathengise amakhaya dollar yabo million Bitcoin
Kulo nyaka uphelileyo, ...
Post Previous:Iimpazamo of Сrypto bezimali. Imposiso 1
Post Next:Iimpazamo ye Crypto bezimali. Imposiso 3